Adeegyada Gaadiidka - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Waxaan aaminsanahay in hubinta helitaanka saxda ah ee waxbarashadu ay ka bilaabmayso ardaydeena oo si nabadgelyo ah ugu socdaalaya ama uga soo noqonaya dugsiga, iyadoon loo eegin qaabka safarkooda. Gaadiidka CEC wuxuu hada bixiyaa adeega baska iskuulada CEC qaarkood * ardayda tiro kooban.
Waalidiinta / Dadka ardayda masuulka ka ah ee doonaya inay codsadaan adeegyada basaska CEC ee la heli karo ee ka wakiil ah ardaygooda ama ardaydooda ayaa laga yaabaa inay codsadaan inta lagu jiro nidaamka Diiwaangelinta Ardayda. Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Diiwaangelinta Ardayda, fadlan toos ula xiriir dugsigaaga CEC.
* Gaadiidka Basaska CEC hadda lama heli karo Dugsiga Sare ee CEC Fort Collins, Dugsiga Dhexe ee CEC Fort Collins iyo Dugsiga Dhexe ee CEC Fort Collins West.
Goobaha Joogsiga Basaska ee CEC
Macluumaadka goobta soo socota ee xarun kasta oo CEC ah ayaa ah la soo jeediyey basaska istaaga sanad dugsiyeedka 2021-22. Dhammaan goobaha joogsiga ayaa la beddeli karaa iyada oo ku saleysan diiwaangelinta. Goobaha ugu dambeeya ee joogsiga leh waqtiyada jadwalka leh ayaa emayl loogu diri doonaa dhammaadka Luulyo kaliya qoysaska ka diiwaangashan gaadiidka. Waqtiyada loo qorsheeyay laguma dhejin doono internetka sababo nabadgelyo awgood. Fadlan la xiriir xaruntaada CEC haddii aad rabto inaad dalbato adeegyada gaadiidka.
Arag Khariidada Google - Joojinta Basaska Aurora
Arag Khariidada Google - joogsiyada Basaska ee Castle Rock
Eeg Khariidadda Google - Colorado Springs Bus Stop
Arag Khariidada Google - Joojinta Basaska Inverness
Arag Khariidada Google - Joogsiga Basaska Parker
Arag Khariidada Google - Joojinta Basaska Windsor
Macluumaadka Adeegga Baska Ardayga ee CEC
Raadinta Basaska Ardayda
Shabakada Iskuulka ee CEC waxay isticmaashaa Zonar MyView ™ arjiga raadinta baska si loo siiyo ogeysiis waqtiyada imaatinka, dib u dhacyada iman kara iyo macluumaad kale oo muhiim ah. Adeegsiga VDayaanna ™ app ayaa looga baahan doonaa ardayda baska raacsan.
Fadlan raadi emayl ka dib Isqorista Ardayda oo ay la socdaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo qoro VDayaanna ™. Riix halkan haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka barato barnaamijka.
Buugga Gaadiidka CEC
Eeg buug -gacmeedka
Su'aalaha ku saabsan Adeegyada Baska Ardayga ee CEC, fadlan guji badhanka Su'aalaha Gaadiidka ee hoose.
Agaasimaha Gaadiidka CEC
Codso maanta si aad uqaado talaabada xigta ee mustaqbalka ubadkaaga!